ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဖခင်ကိုလွမ်းဆွတ်တမ်းတရင်း ကဗျာလေးတစ်ပုဒ် ရေးစပ်ထားတဲ့ ခေးဆက်သွင် - Maythadin
ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဖခင်ကိုလွမ်းဆွတ်တမ်းတရင်း ကဗျာလေးတစ်ပုဒ် ရေးစပ်ထားတဲ့ ခေးဆက်သွင်
ပရိသတ်ကြီးရေ ခေးဆက်သွင်ဟာဆိုရင် ????-? ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကနေတဆင့် အနုပညာလောကကို လျှောက်လှမ်းလာတာ ယခုဆိုရင် အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ ဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းရင်း အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေးဆက်သွင်ဟာ အပျော်တမ်း ?????? လေးတွေနဲ့ ဟာသဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ
မကြာခဏဆော့ပြလေ့ရှိပါတယ်။ယခုလည်း”အားလုံးက မှတ်မှတ်ရရ အစီအစဉ်မှာခေးရွတ်ပြတဲ့အဖေဆိုတဲ့ ကဗျာလေး တင်ပေးပါ ဆိုလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်…ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ ကဗျာလေးမို့ အမှတ်တရ သိမ်းဆည်းနိုင်ကြပါစေရှင့်..”ဆိုပြီး ဖခင်ကို လွမ်းဆွတ်သတိရရင်း ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကို မျက်ရည်ကျကာ ရေးစပ်ထားပါတယ်။ ခေးဆက်သွင်ရဲ့ကဗျာလေးကတော့”အဖေ…ကြာခဲ့ပါပြီအဖေ ရက်တွေလည်း
ပြောင်း လတွေဟောင်းလို့ ဆောင်းအလီလီနဲ့ မိုးအခါခါဖြတ်နွေဘက်တွေလည်း မျက်ရည်စက်တွေနဲ့အိပ်တန်းတက်ခဲ့ဖူးပါပြီတစ်ခြားမိသားစုတွေကို အားကျငါးတန်းနှစ် အဖေ့အလောင်းမီးတိုက်ထဲ သွင်းရကာနီးကိုသတိရမိပါသေးတယ်…ကန်တော့ရင်းတွေး အဖေအိပ်နေတာလေးများဖြစ်မလား??အခေါင်းအဖုံးကိုလှစ်ဟ ချစ်ပါရစေဦး နေပါဦး တဖွဖွခေါ်ချင်ပေမယ့်နာကျင်လွန်းလို့ မအော်နိုင်တော့ပါဘူး လွမ်းတယ်
အဖေမုန့်ဖိုးလေးတွေ အရင်လိုပေးပါစာမရတဲ့အခါ လာဆူပေးပါသီချင်းတွေဆိုလို့ အဖေ့သမီးအငယ်မကပြချင်သေးတာစစနောက်နောက် စိတ်ကောက်ချင်သေးတာ ဘယ်တော့မှ ပြန်မလာနိုင်တာသိပေမယ့်ကောင်းမှုတခု နေ့စဉ်ပြုရင်းသမီးဆုတောင်းတိုင်းသာ ပြည့်မယ်ဆိုသံသရာ တကွေ့ကွေ့ ပြန်တွေ့ပါရစေ အဖေ..”ဆိုပြီး သူမရဲ့ဖေဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်။အဆုံးထိဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
ပရိသတျကွီးရေ ခေးဆကျသှငျဟာဆိုရငျ ????-? ရုပျသံဇာတျလမျးတှဲကနတေဆငျ့ အနုပညာလောကကို လြှောကျလှမျးလာတာ ယခုဆိုရငျ အောငျမွငျမှုတှကေို ရရှိပိုငျဆိုငျနပွေီဖွဈပါတယျ။လကျရှိမှာတော့ မိခငျဖွဈသူနဲ့ ဘဝကိုပြျောရှငျစှာဖွတျသနျးရငျး အနုပညာအလုပျတှကေို ဆကျလကျလုပျကိုငျနတောပဲဖွဈပါတယျ။ခေးဆကျသှငျဟာ အပြျောတမျး ?????? လေးတှနေဲ့ ဟာသဗီဒီယိုလေးတှကေိုလညျး သူငယျခငျြးတှနေဲ့အတူ
မကွာခဏဆော့ပွလရှေိ့ပါတယျ။ယခုလညျး”အားလုံးက မှတျမှတျရရ အစီအစဉျမှာခေးရှတျပွတဲ့အဖဆေိုတဲ့ ကဗြာလေး တငျပေးပါ ဆိုလို့ တငျပေးလိုကျပါတယျနျော…ကိုယျတိုငျရေးထားတဲ့ ကဗြာလေးမို့ အမှတျတရ သိမျးဆညျးနိုငျကွပါစရှေငျ့..”ဆိုပွီး ဖခငျကို လှမျးဆှတျသတိရရငျး ကဗြာလေးတဈပုဒျကို မကျြရညျကကြာ ရေးစပျထားပါတယျ။ ခေးဆကျသှငျရဲ့ကဗြာလေးကတော့”အဖေ…ကွာခဲ့ပါပွီအဖေ ရကျတှလေညျး
ပွောငျး လတှဟေောငျးလို့ ဆောငျးအလီလီနဲ့ မိုးအခါခါဖွတျနှဘေကျတှလေညျး မကျြရညျစကျတှနေဲ့အိပျတနျးတကျခဲ့ဖူးပါပွီတဈခွားမိသားစုတှကေို အားကငြါးတနျးနှဈ အဖအေ့လောငျးမီးတိုကျထဲ သှငျးရကာနီးကိုသတိရမိပါသေးတယျ…ကနျတော့ရငျးတှေး အဖအေိပျနတောလေးမြားဖွဈမလား??အခေါငျးအဖုံးကိုလှဈဟ ခဈြပါရစဦေး နပေါဦး တဖှဖှချေါခငျြပမေယျ့နာကငျြလှနျးလို့ မအျောနိုငျတော့ပါဘူး လှမျးတယျ
အဖမေုနျ့ဖိုးလေးတှေ အရငျလိုပေးပါစာမရတဲ့အခါ လာဆူပေးပါသီခငျြးတှဆေိုလို့ အဖသေ့မီးအငယျမကပွခငျြသေးတာစစနောကျနောကျ စိတျကောကျခငျြသေးတာ ဘယျတော့မှ ပွနျမလာနိုငျတာသိပမေယျ့ကောငျးမှုတခု နစေ့ဉျပွုရငျးသမီးဆုတောငျးတိုငျးသာ ပွညျ့မယျဆိုသံသရာ တကှကှေ့ေ့ ပွနျတှပေ့ါရစေ အဖေ..”ဆိုပွီး သူမရဲ့ဖဘှေတျစာမကျြနှာမှာ ရေးသားထားတာကိုတှရေ့ပါတယျနျော။အဆုံးထိဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိသတျကွီးကို အထူးပဲကြေးဇူးတငျရှိပါတယျ။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အတော်ကြာကအမှတ်တရပုံတစ်ခုကြောင့် ဝတ်မှုံရွှေရည်နဲ့ ပြန်အဆင်ပြေချင်နေတာလားလို့ မှတ်ချက်ပေးခံနေရတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
သူသီချင်းဆိုရင် သားကအမြဲနားပိတ်ထားတတ်ပြီး အရမ်းရှက်တယ်လို့ပြောတာကြောင့် သူမရဲ့ သီချင်းဆိုတဲ့အလုပ်အပေါ် မိသားစုအမြင်ကို ဖွင့်ဟလာတဲ့ ဆုန်သင်းပါရ်
ကိုဗစ်ကာလမှာဝင်ငွေထက် ထွက်ငွေကပိုများနေတာမို့ တောင်းမစားရရုံတမယ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကို ရင်ဖွင့်​ပြောပြလာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်​
​မွေးနေ့မှာမိဘနှစ်ပါးနဲ့ အတူရှိချင်ကြောင်းလေးပြောပြလာခဲ့တဲ့ မြမိုးဂင်္ဂါလေးရဲ့စကားကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ဘုဏ်းသိုက်